I-Cozy Oceanview Cabin
Gcoba uLwandle lwe-Caribbean oluhlanzekile noluhle, kusukela kule ndlu ethokomele, ebanzi neyimfihlo. Jabulela izingadi zikanokusho kunobude obungaphezu kwamahektha ama-2. Buka ukushona kwelanga eduze kwedekhi yolwandle futhi ujabulele i-snorkel yasekuseni kakhulu.
I-Wilton House cabin ilungele ezimbili. Ibekwe ngokubuka okuqondile kolwandle ukusuka embhedeni wakho. Izivakashi zizojabulela ukuphumula okunikezwa izivande zethu. Sitholakala enkabeni yezindawo ezikhangayo ezifana ne-Rick's Café, i-Appleton Rum Tour, i-YS Falls, phakathi kwezinye. Ikhabethe liwumphakathi osogwini, owaziwa ngePeter Tosh Museum, amadolobhana okudoba, ukushona kwelanga okuhle namapulazi emvelo. Ikhabethe litholakala emizuzwini embalwa yezitolo, izitolo ezinkulu kanye namabhizinisi.
I-Bluefields iyindawo ekahle yokuvakasha. Amabhishi ayo anesihlabathi esimhlophe, ukuzola kanye nomoya wokwamukela yikho okushayela izivakashi nezakhamuzi endaweni. IBluefields iyikhaya lesikhumbuzo sikaPeter Tosh, amapulazi emvelo kanye neBluefields Beach eyaziwa emhlabeni wonke.
Nakuba sisivuma isidingo sobumfihlo, sisatholakala ezivakashini uma kungaba nanoma yimiphi imibuzo.